03-20-2013 12:19 PM #241
from Opposite Eye
မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာ လူသေဆုံးမှု မရှိပါဘူး။ ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတချို့ပဲ ရတာပါ။ အရိုက်ခံရတဲ့သူက အ သက် ၅၀ လောက်ရှိမဲ့ သူပါ။ သူနဲ့ သူ့ဇနီးက ရွှေသွားရောင်းတာပါ။ အခုတော့ အဲဒီရွှေဆိုင် နှစ်ဆိုင်လုံး ပျက်စီး သွားပါပြီ။ နောက်ပြီး မိတ္ထီလာဈေးကြီးကိုလည်း ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ မြို့ပေါ်က ဆိုင်တချို့လည်း ပိတ် သွား ပါပြီ။ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား ၅၀ လောက်က အခုအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနေပါပြီ။ မီး သတ် ကားေ တွလည်း ရောက်နေပါပြီ။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ၊ ၈၈ အစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက လူေ တွ လည်း အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားသော်လည်းပဲ လူအုပ်ကြီးကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
academy, Alintan, aprilboy, complicatedcool, fergusan, Grace, honelay86, icy, Jim, khit, ko too, Kohtut, little caesar, MNO.BN, mokenlay, mrlynn, myawlwint, robin76, RunAtServer, shadow69, supernova, thidar, TUN2N, wasabi, zero6, zzz
03-25-2013 04:52 PM #242
From Eleven Media:
ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ တာမွေ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် စသည့်မြို့နယ်များ၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရံမီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများက လမ်းအလိုက် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
academy, AungNN, batoe, complicatedcool, Grace, greenwood, heartlesshunter, honelay86, icy, k-pooh, khit, ko too, Kohtut, KoShweYoeLay, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, Phantom, phyo2006, RunAtServer, shadow69, THARGYII, TUN2N, zero6
04-02-2013 01:01 AM #243
or®wOD;odef;pdefeJ hawG hqHkcJhygw,f/
a': atmifqef; pkMunfeJ hvnf;awG hqHkcJhygw,f/
( udkabmMuD;ESifhrSK;aZmfazhpfbkwfrS"gwfyHkrsm;ul;,lygonf )
academy, complicatedcool, Deadmanwalking, greenwood, honelay86, k-pooh, ko too, mahawgani, mgknow, mgmgthan, MNO.BN, nlsoe1974, Phantom, shadow69, THARGYII, tiptop, zero6
04-07-2013 06:00 AM #244
Last edited by zani; 04-07-2013 at 11:41 AM.
batoe, devilgrin89, greenwood, honelay86, k-pooh, khit, ko too, mahawgani, mgknow, mgmgthan, MNO.BN, shadow69, thidar, tiptop, zero6
04-11-2013 04:00 PM #245
နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေပဲ ရှိနေနေ
မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကတော့ အားတက်စရာပဲ ။
နှစ်ဟောင်းက အဓိကရုဏ်းတွေအားလုံး နှစ်သစ်ကို ယူမလာကြပါနဲ့တော့ ........
မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ .......
photo: ဒီမိုဝေယံ 'FB
batoe, devilgrin89, DrJones, greenwood, honelay86, khit, ko too, mahawgani, mgknow, mgmgthan, MNO.BN, nlsoe1974, nomoregirl, Phantom, phyo2006, shadow69, tiptop, yokesoe
05-10-2013 08:24 PM #246
လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် မီးလောင်းမှုဖြစ် (ရုပ်/သံ)
မေလ ၁၀နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင် လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့် အနော်ရထား လမ်းထောင့်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Ice Berry ဆိုင်မှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား
The Irrawaddy (Burmese Version) azhbkwfpmrsufESmu ul;,lazmfjywmyg
adaptor, Alintan, batoe, DrJones, greenwood, honelay86, kaungkin02, khit, ko too, MNO.BN, shadow69, yokesoe
05-20-2013 05:06 AM #247
President U Thein Sein Q&A at VOA Town hall
abya, academy, batoe, greenwood, ko too, NyoMar, shadow69
05-20-2013 06:48 AM #248
txufu ,lusL AD'D,dkrSmqdk&if
23;38 rdepf (vufyHawmif;/ tajccHOya' eJY 'DyJ,if; ar;cGef;)
31;00 rdepf (OD;0if;atmif &JY ar;cGef
aemufqHk; rawmh orwMuD;vnf; tm;jcif; xjyefoGm;&w,fAsm/
orwMuD; jyefNyD;aemuf 'kwd,ykdif;yg 'k0efMuD; OD;&JxGwf qufvuf ajzMum;wJYzdkifyg 0gumtl'if ar;wmvnf; awGYvdkufygw,f
ar 18 &ufae h 0g&Sifwef jrefrmoH&Hk;wGif jrefrmrdom;pk rsm;ESihf OD;odef;pdef awGYqHkyGJ toHzdkif udk tmtufzfatrS wifqifxm;wmyg
Last edited by MCextreme; 05-20-2013 at 07:35 AM.
abya, batoe, DrJones, greenwood, Jim, ko too, MNO.BN, NyoMar, oowatoke, shadow69
05-20-2013 07:49 AM #249
17 rwf 2013 ckESpf MopaMw;vs EdkifiH uifbm&mNrdK hodk h a&muf&Sdaeaom v0u 0efMuD; OD;cif&D rS
jrefrmEdkifiH wGif tNrJwrf; aexdkifcGifh jynf0ifcGifh pHepf (yDtm) taMumif;
jynfwGifNidrf;csrf;a&; vkyfief;pOf ESifh
2014 ckESpf jrefrmEdkifiHvHk;uRwf oef;acgifpm&if; aumuf,lrnfh taMumif;
rMunf&ao;wJY abmf'grsm; Munfhzdk hyg/
abya, academy, batoe, DrJones, greenwood, Jim, ko too, MNO.BN, oowatoke, shadow69
05-21-2013 02:24 PM #250
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရီးစဉ်
abya, devilgrin89, greenwood, Jim, KM Wai, ko too, ktg, Lynn Eainthu, nomoregirl, oowatoke, shadow69, Tonyhtun, yokesoe